Ozi banyere otu esi aga Iceland | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, Islandia
N'etiti Arctic na North Atlantic bụ Islandia, otu mba ọ bụ mba kacha nta na Europe. Anyị ekwuola banyere ọtụtụ ihe ịtụnanya dịka ọ nwere ezigbo ọdịdị dị egwu maka ndị hụrụ ndụ n'èzí na Nature: Blue Lagoon, oke ugwu ya, oke osimiri nwere ice ice, ọgba, glaciers na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ma gịnị ka anyị kwesịrị ịma banyere obodo a? Kedu ihe ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-aga Iceland? Olee otú anyị na-eme? Echere m Transgbọ njem ndị dị a canaa ka anyị nwere ike iji gaa Iceland? Ọ bụrụ n'àgwàetiti ahụ bụ isi n'okporo ụzọ njem gị, ihe na-eme gị mkpọtụ ma dọta gị nke ukwuu, mgbe ahụ gụọ akwụkwọ a nke ọma iji chọpụta njem ị ga - eme wee hụkwuo n'anya, ma ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume, na Iceland mara mma.
1 Jiri ụgbọelu gaa Iceland
2 Jiri ụgbọ mmiri gaa Iceland
Jiri ụgbọelu gaa Iceland
Taa ụzọ kachasị mma ma dị ngwa Site na ụgbọ elu. N’agbata obodo ndị dị na Europe, njem a nwere ike ịdị n’agbata awa atọ na ise, ma ọ bụrụ n ’isi n’Ebe Ugwu Amerịka bido n’agbata ise na asaa ma ọ bụrụ na ọ bụ site na ụwa ndị ọzọ. Ma ọ dịghị mgbagwoju anya ma ọlị. Ndị na-esonụ bụ ụgbọ elu na-efegharị na Iceland:
icelandair: Ọ naghị efe efe na Spain n’afọ niile, naanị n’oge, ọ na-esi Las Palmas, Tenerife na Valencia efe. N'oge ọkọchị ọ na-agbakwunye Barcelona na Madrid na obodo ndị ọzọ dị na Europe. Afọ ndị ọzọ ọ na-eme ya site na Amsterdam, Boston, Copenhagen, Frankfurt, Paris, London na obodo ndị ọzọ dị na Europe na North America.
Ikuku ikuku: si na Spain ọ na-efekwa naanị n'oge na-eme ya site na Alicante, Barcelona na Tenerife. Site na Berlin, Copenhagen, London na Paris n’afọ niile.
Iberia Express: na-enye ụgbọ elu oge niile n'etiti Madrid na Keflavik n'etiti June na Septemba nke afọ a, 2016. Ha ga-amalite ọrụ na June 18.
Primera Ikuku: Site na Spain ọ nwere ụgbọ elu si Tenerife n'afọ niile wee si Alicante, Almería, Barcelona, ​​Las Palmas na Malaga.
Vueling: si na Barcelona na Rome gbagata Keflavík.
wezuga: Ọ naghị esi Spain efe ma ọ nwere ụgbọ elu oge niile na Basel, Belfast, Bristol, Edinburgh, Geneva, London na Manchester.
SAS: si Oslo si ofufe
Norwegian: n'afọ niile site na Oslo na Bergen.
Delta: Site na Febụwarị rue Septemba, ụgbọ elu kwa ụbọchị dị n'etiti New York na Iceland.
ụgbọ elu: ijiji si n’agbata Mee na Septemba site na Berlin, Dusseldorf, Hamburg na Munich.
Austrian Airlines: E nwere ụgbọ elu kwa izu si Vienna n'etiti June na August.
ikuku griin: na-enye ụgbọ elu oge niile n'etiti Nuuk, Greenland na Iceland.
NIKI: si na Vienna si n'etiti June na September pụọ.
Airways ụgbọ elu: ụgbọ elu si Copenhagen, Bergen na agwaetiti Faroe.
Transavia: ụgbọ elu na-esite na Paris n'etiti May na September.
Deutsche Lufthansa: ụgbọ elu na-aga site na Frankfurt na Munchen n'etiti May na Septemba.
British Airways: ụgbọ elu mgbe niile si London.
Edelweiss Air: ụgbọ elu kwa izu site na Geneva na Zurich, n'oge ọkọchị.
Dị ka ị hụrụ e nwere ọtụtụ ụgbọ elu si obodo dị iche iche na Spain ọ bụ ezie na a gharịrị ịtụle na anaghị enye ha afọ niile. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ụgbọ elu na-esi na Europe ndị ọzọ efe, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọọ njem ogologo ma ọ bụ na-abịaru Iceland site n'akụkụ ọzọ, enwere ọtụtụ nhọrọ n'etiti ụgbọ elu ụgbọ elu ochie na ọnụ ala.
Iceland nwere ọdụ ụgbọelu abụọ, ma isi na nnukwu bụ Keflavík si, nke dị kilomita 48 site na obodo Reykjavík, isi obodo. Na mkpokọta, ụgbọ elu ụlọ, ụgbọ elu ụlọ, na ndị na-aga ma na-alọta Greenland na-eji obere Ọdụ ụgbọ elu Reykjavík, nso obodo ahụ. Mana ụgbọ elu abụghị naanị ụzọ esi aga Iceland.
Jiri ụgbọ mmiri gaa Iceland
Anyị nwekwara ike gaa ụgbọ mmiri, ọ bụ ezie na ọ gaghị abụ nhọrọ kachasị ọsọ ma n'ezie ọ belatala na nhọrọ ole na ole. E nwere ụgbọ mmiri a na-akpọ Line Smyril nke nwere ọrụ kwa izu, nke Rgbọ mmiri Norröna, site na Hirsthals, nke dị na Denmark, site na Tórshavn, na agwaetiti Faroe, ruo Seyoisfjörour, n’ebe ọwụwa anyanwụ Iceland. Ọ bụghị ọnụ ala, ma ọ bụ ezigbo ụgbọ mmiri. O nwere ọrụ ọzọ, n'afọ niile, n'etiti Denmark na Faroe, na Iceland bụ akụkụ nke ụzọ ahụ site na njedebe nke Machị ruo Ọktọba. N'oge oyi, ụzọ ahụ dị ụkọ ma dabere na ihu igwe.
Ratesgbọ mmiri na-adabere n'ụbọchị njem, ma ị nwere ụgbọ ala ma ma ọ bụ na ị họrọghị ụlọ. Otu njem site na Hirtshals gaa Seyoisfjorour, njem elekere 47, maka ndị njem abụọ na obere ụgbọ ala n'oge dị elu (June-August), na-efu onye ruru € 559 ​​maka onye ọ bụla n'ime ụlọ dị ọnụ ala. Maka onye na-eme njem naanị ya na enweghị ụgbọ ala, ọnụahịa dị ihe dị ka euro 260 n'ime ime ụlọ nwere akwa ndina.
Companylọ ọrụ a, Smyril Line, na-enye nchịkọta ma ọ bụrụ na njem bụ ihe gị, m na-akwado ka ị lelee weebụsaịtị ha ebe enwere njem na ụgbọ mmiri a na-ajụ, Norröna, dị ezigbo mma. Ndị a bụ ụzọ Norröna:
Zọ 1: Denmark - Iceland. N'oge dị elu, enwere njem abụọ kwa izu. Ọdụ ụgbọ mmiri ahụ bụ Hirtshals na Denmark, Tórshavn dị na Faroes na Seyoisfjorour na Iceland. 47 awa njem. Mostbọchị zuru oke maka ndoputa bụ ụtụtụ Tuesday. Nwere ike ịga njem na Satọde mana enwere nkwụsị ụbọchị atọ na agwaetiti Faroe. N'oge dị ala ụbọchị ịpụ Denmark bụ Satọde.
Zọ 2: Denmark - Agwaetiti Faroe. N’oge dị elu, enwere njem izu abụọ na Faroes, n’ụtụtụ Satọde na Tuesday. N'etiti na oge dị ala ọ na-esi na Denmark pụọ na Satọdee.
Zọ 3: Faroe Islands - Iceland. N’oge dị elu, ụgbọ mmiri Norröna na-esi na Faroe Islands pụọ gaa Iceland na Wednesde na site na Iceland n’ụtụtụ Tọzdee. N’oge dị ala na etiti ya, ọ na-eme ya site na Faroe na Mọnde na site na Iceland na ehihie Wednesde.
Ọ bụrụ na ịhọrọ ụgbọ mmiri ị kwesịrị ịma ihe ole na ole ndị ọzọ. N’agbata ọdụ ụgbọ mmiri Seyoisfjorour na obodo Reykjavík njem bọs dị n’agbata elekere asatọ na iteghete. I nwekwara ike iji bọs gaa obodo ndị ọzọ na Iceland ma nwee ọfịs ndị njem na otu ọdụ ụgbọ mmiri ahụ nke na-enye gị ozi niile dị mkpa.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọghị ịbanye n'ụgbọ mmiri na-amasị gị echiche nke irughari enwere ụfọdụ ụlọ ọrụ na-agbakwunye Iceland na ụzọ ha, Fred Olsen Cruises, P&O na Cunard, ọmụmaatụ. Ha na-emetụkarị isi obodo Iceland na obodo Isafjörour na Akureyri, ọ bụ ezie na ha esighi na Spain malite na ị ga-aga England, ọbụlagodi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Ozi banyere otu esi aga Iceland
Agwaetiti kachasị mma na Europe
Corleone na Sicily, ebe mmalite nke mafia nke chọrọ ịkwụsị ịbụ otu